ubusazi: ezi Smartphones azinayo ikhamera, kwaye ngenxa yesizathu esivakalayo
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Ngaba uyazi: ezi smartphones azinayo ikhamera, kwaye ngenxa yesizathu esihle
Ngaba uyazi: ezi smartphones azinayo ikhamera, kwaye ngenxa yesizathu esihle
Ngenye imini, abazukulwana bethu baya kujonga ngasemva kwiifowuni ezazisetyenziswa kwinkulungwane yama-20 kwaye bazibuze ukuba zazinjani iifowuni ukuba babengenayo ikhamera. Okanye ubuncinci bezo & apos; uqikelelo olukhuselekileyo esinokuyenza ngoku ukuba iikhamera yenye yeefowuni kunye neempawu eziphambili. Nokuba ukungcola-kwexabiso eliphantsi, akukho magama aphathwayo, uhlobo lwazo oluthengiswa ngesikiti zii-OEMs zamaTshayina, zineekhamera, nangona zisisiseko.
Ngaba uyazi ukuba kukho inani elincinci leemodeli ze-smartphone eziyile ngaphandle kweekhamera? Ezi zixhobo ezakhelwe i-niche yabathengi abangakwaziyo nokuzisa ikhamera kwindawo yabo yokusebenza, kodwa basafuna ukufikelela kwi-imeyile yabo, iinethiwekhi zentlalo kunye nabaxhasi be-IM.
Enye yeenkampani ezimbalwa ezinee-smartphones ezingezizo ezekhamera kulungelelwaniso lwazo yi-iNO. I-iNO Scout 2 -enye yeemodeli zayo zamva nje-iyisimo se-Android esenziwe ngombala esine-4-intshi yesikrini, iprosesa ye-1.3GHz quad-core, 1GB ye-RAM kunye ne-16GB yokugcina. Kukho ii-apos; kunye ne-slimmer, lighter iNO 2, ebonelela ngomboniso we-4.3-intshi ye-AMOLED, iprosesa ye-1.3GHz quad-core, 1GB RAM kunye nokugcinwa kwe-8GB. Ezi zimbini zibiza i- $ 300 kunye ne- $ 260 ngokwahlukeneyo. Enye inkampani ebizwa ngokuba yiPhicomm ine-i600nc, eyifowuni ye-Android engeyiyo yekhamera ene-4.3-intshi yesikrini kunye neprosesa esembindini ye-1.2GHz. Okwangoku ithengiswa malunga ne- $ 110.
Nangona kunjalo, ukufumana i-smartphone efanelekileyo engeyiyo yekhamera eMelika kunokuba nzima. Iimodeli ezinje ngezi sisandula ukuqaqambisa zifumaneka kuphela kwi-eBay kwaye kuphela ukuba unethamsanqa. Okwangoku, iVerizon ibonelela ngenkangeleko engeyiyo yekhamera yeBlackBerry Bold 9930. Isenokuba yimodeli ephelelwe lixesha, kodwa isasebenza ngakumbi kunefowuni engenasimilo. Ngenye indlela, zikhona iiNokia 207. Ayizizo iifowuni, kodwa yenziwe i-3G kwaye inakho ukufikelela kuWhatsapp, Facebook nakuTwitter.
izikhombisi: mna hayi , Ingqungquthela , Inguqulelo
5 iimonitha zoxinzelelo lwegazi eziqhagamshelekileyo ezixhuma izixhobo ze-Android kunye ne-iOS